“Modric waxaa Ballon d’Or ka mudan……..”.- Cavani oo ka biyo diiday in xiddiga reer Croatia la isugu daro FIFA the Best iyo Ballon d’Or – Gool FM
Jürgen Klopp oo uga digay kooxdiisa Liverpool awooda Manchester United
Dajiye November 21, 2018
(PSG) 21 Nof 2018. Weeraryahanka kooxda Paris St Germain ee Edinson Cavani ayaa iska diiday in laacibka khadka dhexe Real Madrid ee Luka Modrić uu ku guuleysto abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or.
Edinson Cavani ayaa sheegay in Ballon d’Or aysan muhiim ahayn in la gudoonsiiyo isla ciyaaryahanka kusoo guuleestay abaal marinta ciyaaryahanka ugu fiican aduunka ee FIFA The Best, taasoo dhawaan la gudoonsiiyay Luka Modrić.
Weeraryahanka kooxda Paris St Germain ayaa wareysi uu ku bixiyay radio “Monte Carlo” ayaa wuxuu kaga hadlay abaal marinta Ballon d’Or isagoona meel iska dhigay warka Messi iyo Ronaldo.
“Laga yaabee inuu ku guuleysto Raphaël Varane ama mid kood xidigaha Antoine Griezmann iyo Kylian Mbappé, aniga ahaan waxaan qabaa inuu ku guuleysto mid ka mid ah xidigaha reer France”.
“Waxaa jira ciyaartoy kale, laakiin waa inuu noqdaa ciyaaryahan French ah, hadiiba ay dhacdo in abaal marintan lagu guuleysto, sababtoo ah waxay kusoo guuleysteen waxyaabo waaweyn, waa in guuleystaha uu noqdaa mid ka mid ah saddexdan ciyaaryahan”.
“Luka Modrić wuxuu bixiyay xili ciyaareed cajiib ah, balse sidoo kale Raphaël Varane wuxuu kusoo guuleestay tartanka Champions League iyo Koobka Adduunka”.
“Modrić wuxuu gaaray finalka koobka aduunka, laakiin Varane wuxuu ku guuleestay koobka, wuxuu mudan yahay qadarin xoogan”.
Imise ayay Mushaar ahaan u qaataan, Hazard, Jorginho, David Luiz, Willian iyo.....(EEG Liiska Xiddigaha ugu Mushaarka badan Chelsea)